I-Bicheno Ocean Hideaway - I-Airbnb
I-Bicheno Ocean Hideaway
IBicheno Ocean Hideaway ilala iindwendwe eziyi-8, inekhitshi elikhulu nendawo yokonwaba. Le ndawo ibonakala kakuhle kakhulu xa ukuyo ibe ulwandle lukufutshane neendawo, iivenkile, iivenkile kunye neevenkile zokutyela zaseBicheno. Beka ngaphezu kwamanqanaba amabini inqanaba ngalinye linegumbi lokulala elikhulu, igumbi lokulala elinye elinamagumbi amabini ibe ligumbi lokuhlambela elenza libe yindawo efanelekileyo yokuhlala amaqela amancinci okanye iintsapho ezimbini. Sinendawo entle yokuphumla size sonwabele idolophu entle enonxweme lwaseBicheno
E-Bicheno Ocean Hideaway sinekhitshi elipheleleyo kunye nezixhobo ezininzi zokupheka ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho zokupheka. Indawo enkulu yokutyela evulekileyo inikezela ngeendawo eziliqela zokuphumla nokukhululeka. Inqanaba elisezantsi lithe tyaba ngokupheleleyo xa ungena kwishawa ngoxa igumbi lokuhlambela elisemgangathweni linebhafu enkulu kakhulu. Sinikezela ngazo zonke izinto zebhedi, iitawuli, iti, ikofu, ubisi nezinto zokuhlamba. Nangona kukho indawo yokupaka imoto, kukho indawo yokupaka eyongezelelekileyo esecaleni kwendlela elungele iimoto ezincinci.
4.95 · Izimvo eziyi-154
IBicheno yidolophu entle enelanga kwi-Great Eastern Drive yase-Tasmania. Uhamba nje imizuzu embalwa ukuya kwiintlanzi ezisandul 'ukuvunwa kunye neetshipsi kwiTasmanian Coastal Seafoods kwiGulch okanye kwiLobster Shack enkulu apho unokuphathwa ngeCrayfish yasekuhlaleni. Le dolophu iflethi ibe kulula ukuya kwi-Supermarket, iPharmacy, iButcher, iCafe 's, iHotele, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zeempahla. Uhambo lwePenguin kunye nexesha lasebusuku luyafumaneka edolophini, okanye ungazulazula esitratweni uze ubone ii-penguin zifika ekhaya zize zizulazule.
Sifumaneka ngokuthumela umyalezo nanini na ngexesha lokuhlala kwakho kwaye siza kuzama ukuphendula ngoko nangoko.
Inombolo yomthetho: DA 2016 / 00205
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bicheno